यस्ता छन् जमराका फाइदाहरू – Khabar Silo
काठमाडौं – जौ पौष्टिक गुणयुक्त अन्न हो । चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई औषधिका रूपमा लिने गरिन्छ ।त्यसैले जौको जमरालाई सांस्कृतिक मात्र नभई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत अति उपयोगी मानिन्छ ।
पछिल्लो समय जमराको जुस बनाएर खाने प्रचलन बढेको छ । आयुर्वेदमा जौ लाई विशेष औषधि मानिएको छ । जमराको जुस सेवन गर्दा रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ ।छाला, कलेजो, रगतसम्बन्धि समस्या, ज्वरो, रक्तचाप, घाउ, चोटपटकलगायत स्वास्थ्य समस्यामा जमराको जुसलाई औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
हरियो जमरामा शरीरलाई आवश्यक खनिज पदार्थ, भिटामिन, प्रोटिन, एमिनोएसिडजस्ता तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । जमरामा प्रशस्त क्लोरोफिल हुने भएकोले एन्टिअक्सिडेन्टको गुण पनि पाइन्छ, जसले कोषलाई छिटो बुढो हुनबाट बचाउँछ र शरीर तन्दुरुस्त राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउन, रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलनमा राख्न, दाँत र कपाल स्वस्थ राख्न, पाचन प्रक्रिया सहज बनाउन र रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न जमराको जुस लाभदायी मानिन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अनुहारको दाग धब्बाले सुन्दरता बिगार्‍यो ? यी घरेलु उपायबाट मिल्नेछ छुटकारा !
कतिपय अवस्थामा अनुहारमा देखापर्ने दागले अनुहारको सुन्दरतामा समेत ह्रास ल्याउँछ । आज हामी प्राकृतिक रूपमा यस्ता दाग हटाउन अपनाउनु पर्ने बिभिन्न उपायहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । कागतिको रस दाग भएको ठाउँमा कागतिको रस लगाएर आधा घण्टापछि सफा पानीले सफा गरेमा दाग हराउँदै जान्छ । नतिजा देखापर्न दुईरतीन महिनासम्म नियमित कागतीको रस लगाउने गर्नुपर्छ । स्ट्रबेरी […]
बिहान खाली पेटमा लसुन खानुका पाँच फाइदा यस्ता छन्
Posted on September 25, 2020 Author khabar silo
हाम्रो तरकारी स्वादिलो बनाउन हामी लसुनको प्रयोग त गरिरहेका हुन्छौँ । तर, यसको औषधीय गुणका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । आयुर्वेदले त लसुनलाई औषधी नै मानेको छ । बिहान खाली पेटमा लसुन खाँदा झन् धेरै फाइदा हुन्छ । खाली पेटमा लसुन खानुका पाँच फाइदा यस्ता छन्- उच्च रक्तचापबाट छुटकारा विहान खाली पेटमा एक […]
अमिलो पानी आउने, छाती पोल्ने समस्या छ ? यसरी गर्नुस् घरेलु उपचार
तपाईलाई पेट फुल्ने,अमिलो पानी आउने, खाना नरुच्ने समस्या देखियो ? यस्तो अवस्थमा डर लाग्ने, आत्तिने, बैचैनी बढ्ने गरको छ ? यदि यस्तो समस्या छ भने तपाईलाई अम्लपित्त भएको हुनसक्छ । अम्लपित्तको समस्या बढ्दै गएमा मानिसहरुमा उदास हुने गर्छन् । अम्लपित्त भनेको ग्यास्ट्रि ग्ल्यान्डले खाना पचाउनका लागि ग्यास्टिक रस निष्कासन गर्दा रस बढी निष्कासन भएमा पेटमा […]
आफ्नो प्रेम जीवनबारे बोलिन् जोया अख्तर